Jiro fandidiana, latabatra fandidiana, pendant fitsaboana - Wanyu
Fampidirana LEDD500 / 700 dia miresaka fahazavana ara-pahasalamana LED dobo avo roa heny. Ny trano maivana amin'ny hopitaly dia vita amin'ny firaka aliminioma misy takelaka aluminium matevina ao anatiny, izay tena manampy amin'ny famafana ny hafanana. Ny takamoa dia takamoa OSRAM, mavo sy fotsy. Ny efijery mikasika LCD dia afaka manitsy ny fahazavana, ny mari-pana amin'ny loko ary ny CRI, izay azo ovaina amin'ny ambaratonga folo. Ny sandry mihodina dia mandray sandry alimina maivana ho an'ny fametrahana toerana marina. Misy safidy telo amin'ny sandan'ny lohataona, ...